Maxay Ahayd Sababtii Uu Goolhayaha Arsenal Ee Emiliano
Goolhaye Emiliano Martinez ayaa ilmada xajisan kari waayey markii ay kooxdiisa Arsenal ku guuleysatay tartanka FA Cup, isla markaana uu qayb weyn kasoo qaatay guushan isaga oo helay fursaddii ugu weynayd muddo 10 sannadood ah oo uu joogay Arsenal.
Goolhayaha reer Argentine ayaa bishii June dhamaadkeeda buuxiyey booskii uu ka dhaawacay Bernd Leno, waxaana kooxda uu isaga oo da’da yar uu kusoo biiray ee uu fursadda ka waayay markan u suurtogashay inuu koobkii ugu horreeyey ay ku guuleystaan isaga oo goolka dhex-taagan.
Markii ayaa laacibkan ay warbaahintu isku dayday inay waraystaan, waxaana mar kaliya la arkay isaga oo ilmadu indhihiisa qoysay oo uu ooyayo, waxaana sasabay oo aamusiiyey weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang oo ahaa geesiga labada gool u dhaliyey Arsenal ee guusha u horseeday.
Martinez oo ay da’diisu tahay 27 jir ah, waxa uu Arsenal kaga soo biiray naadiga Independiente ee ka dhisan waddanka Argentine iyadoo ay da’diisu ahayd 16 jir, waxaana markii hore loo diray kooxda da’yarta oo uu waqti ku qaatay ka hor intii aan amaah loogu dirin kooxaha Oxford United, Sheffield United, Rotherham United, Wolves, Getafe iyo Reading.
14 ciyaarood oo xidhiidh ah oo uu goolka ugu jiray Arsenal ayuu kusoo xidhay fasla ciyaareedka, waxaanu muujiyey sida uu ugu diyaarsan yahay inuu booska kula dagaallamo Bernd Leno marka uu dhaawaca kasoo laabto.
Waraysi uu bixiyey markii ay dhamaatay ciyaartii xalay, ayuu ku sheegay in lacagtu aanay dhinaciisa qiimo badan ka lahayn, isla markaana uu ka door bidayo guulaha kooxdiisu gaadhayso.
Si kastaba, goolhaye Martinez waxa uu xalay noqday mid aad loogu hadal hayo baraha bulshada, iyadoo laga eegayo bandhiggii uu soo muujiyey iyo oohintii uu xili ciyaareedka kusoo xidhay.